Ìhè okporo ụzọ, mgbaàmà okporo ụzọ, nkwụsị ọkụ, Sistemụ ọkụ okporo ụzọ - Qixiang
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Qixiang Traffic Equipment Co., Ltd.dị na mpaghara mmepụta ihe Guoji na ugwu nke obodo Yangzhou, mpaghara Jiangsu, China.Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ ewepụtala ọkụ ọkụ dị iche iche nke ụdị na agba dị iche iche, ma nwee njirimara nke nchapụta dị elu, ọdịdị mara mma, ịdị arọ dị arọ na mgbochi ịka nká.Enwere ike iji ya maka isi mmalite ọkụ nkịtị na isi iyi ọkụ diode.Mgbe etinyechara ya n'ahịa, ọ natara otuto otuto site n'aka ndị ọrụ ma bụrụ ezigbo ngwaahịa maka nnọchi ọkụ mgbaàmà.Na ọma ulo oru usoro nke ngwaahịa dị ka electronic uwe ojii.
okporo ụzọ Qixiang
Njirimara ngwaahịa 1) Ọkụ okporo ụzọ mejupụtara oriọna LED dị oke elu….
Ngwaahịa oke voltaji na-arụ ọrụ: DC-24V The ìhè emitting elu di...
Nkọwa ngwaahịa ụdị ọkụ okporo ụzọ Remote Control na-eji ultra-high...
Ọrụ nkọwa ngwaahịa na atụmatụ: 1.large ihuenyo LCD Chinese ngosi, h ...
Ọrụ na atụmatụ 1.large ihuenyo LCD Chinese ngosi, mmadụ-igwe inte ...
22 Mpụta ịkparịta ụka n'Ịntanet
Nkọwa ngwaahịa Nke mbụ, onye na-ahụ maka ọkụ okporo ụzọ na-ejikọta advanta...
Ihe mgbochi okporo ụzọ anyanwụ Studs
Nkọwa ngwaahịa Safeguider akụrụngwa mmezi okporo ụzọ awara awara...
Usoro ngafe ndị ji ụkwụ aga...
Nkọwa ngwaahịa Nha oge niile Hazie ihe nkiri na-atụgharị uche+A...
Ngụta akara okporo ụzọ Li...
Ngosipụta mkpụrụ osisi nkọwa ngwaahịa nkowa nha nha dị elu...
300mm Driveway anyanwụ LED Tr ...
Nkọwa ngwaahịa 300mm Driveway Solar LED Traffic Light Isi iyi ọkụ ...
Ihuenyo zuru oke 400mm na Count...
Atụmatụ 1. Obere nha, eserese elu, mgbochi corrosion.2. Iji elu-...
Ihe nrịbama okporo ụzọ ma ọ bụ akara okporo ụzọ bụ akara arụnyere n'akụkụ ma ọ bụ n'elu okporo ụzọ iji nye ntụziaka ma ọ bụ nye ndị na-eji ụzọ ozi.
Enwere ike ịchịkọta akara okporo ụzọ n'ụdị dị iche iche.Akara ịdọ aka ná ntị ihe egwu, akara mkpa mbụ, akara mmachi, akara amanyere iwu, akara iwu pụrụ iche, ozi, akụrụngwa, ma ọ bụ akara ọrụ, ntụzịaka, ọnọdụ, ma ọ bụ akara ngosi.
Nlele zuru ezu Kpọtụrụ ugbu a
A na-eji akụrụngwa nchekwa okporo ụzọ jikwaa usoro a na-eme kwa ụbọchị, okporo ụzọ na usoro okporo ụzọ.Akụrụngwa nchekwa taffic bụ isi gụnyere ihe mgbochi nchekwa raffic, cones nchekwa okporo ụzọ na akara okporo ụzọ.
Ọkụ ọkụ anyanwụ dabara adaba maka ịnye akara ngosi okporo ụzọ ma ọ bụ ngwa blinker okporo ụzọ na-enweghị ịdabere na grid eletrik.Ha dị mfe ịtọlite ​​​​ma rụọ ọrụ. Ha na-achọ ntakịrị ihe na-adịghị edozi n'ihi na ha enweghị akụkụ na-akpụ akpụ.
Ìhè na-acha uhie uhie
Nguzogide mmetụta dị elu.Okpomọkụ na-arụ ọrụ site na -40 ° C ruo 74 ° C. Mgbochi ntụgharị n'ime intermodulation.Ngbanwe oriọna dị mfe na ngbanwe axial nke isi iyi ọkụ.
Osisi ọkụ ígwè
Ọdịdị okporo ụzọ ígwè
Iji gboo mkpa ndị mbụ, QX Traffic na-enye nhọrọ dị ukwuu nke nhazi ọkụ okporo ụzọ igwe n'ụdị ọkọlọtọ na nke omenala.
Ọkụ okporo ụzọ na-akwado anyanwụ, Ìhè mgbaàmà anyanwụ, Akara ọkụ okporo ụzọ, Ìhè okporo ụzọ anyanwụ, Agba mgbama okporo ụzọ, Ìhè mgbaàmà okporo ụzọ,